कसले गर्यो सुशान्तको फेसबुक प्रोफाइल चेन्ज, किन भावुक बने फ्यान ?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। बलिउडका दिवङ्गत अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको फेसबुक प्रोफाइल तस्बिर परिवर्तन गरिएको छ । **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **
सुशान्तको राजपूतको पिआर टीमले उनको फेसबुक प्रोफाइल तस्बिर परिवर्तन गरेका हो । कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएपछि फेसबुकमा कुनै पनि पोस्ट अपडेट हुँदैन ।
तर, उनका पिआर टीमले उनको फोटो परिवर्तन गरेपछि यो बिषयले बलिउडमा चर्चा पाएको छ । सुशान्तको प्रोफाइल तस्बिर परिवर्तन भएपछि उनका दर्शकहरू हैरान छन् । उनका दर्शकले तस्बिर परिवर्तन भएपछि दुख व्यक्त गरेका छन् ।
उनको फोटो परिवर्तन भएपछि लाखौँ फ्यानले तस्बिरमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । जसमा एकनाले लेखेका छन्- ‘सुशान्त फर्किएर आएजस्तै लागिरहेको छ ।’ अर्को युजर्सले लेखेका छन्, ‘सुशान्त सधैँ हाम्रो यादमा रहनेछन् ।’ त्यसै गरी, अर्काले लेखेका छन्-‘यो कसरी हुन सक्छ ? कसले यो परिवर्तन गर्‍यो ?’
उनका फ्यानहरू भावुक भएर तिमी जीवित भएर आफै प्रोफाइल परिवर्तन गरेको भए भनेर फ्यनाहरु भावुक बनेका छन् । प्रोफाइल तस्बिर परिवर्तनले फेरि एकपटक फ्यान माझ सुशान्तको सम्झना ताजा गरेको छ ।